RW Cabdiweli: Alshabaab kala carar ayay ku jiraan – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Ra’iisul wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Cabdiweli Sheekh Axmed maxamed ayaa maanta xafiiskiisa ku qabtay shir jaraa’id, kaasoo uu uga hadlay howlgalka Ciidammada Soomaaliya iyo AMISOM oo iskaashanaya Al-Shabaab ay uga qabsadeen magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Ra’iisul wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed, ayaa xaqiijiyey in ciidammada maanta ay dhammeystireen qabsashada magaalada Baraawe, isla markaana ciidammada halkaas ay si weyn ugu soo dhoweeyeen shacabiga Soomaaliyeed.
“Ciidankeenna Geesiyaasha ah iyo AMISOM waxay saaka qabteen degmada Baraawe oo ahayd xaruntii ugu weynayd kooxda Al-shabaab, dadka reer Baraawe oo ah bulsho nabad jeceylka ku caan ah, aad ayay u soo dhoweeyeen in laga dul qaaday cabburintii ay ku hayeen Al-shabaab. Howlgalladu waa kuwa socon doona ilaa dalka oo dhan laga ciribtiro Argagixisada” ayuu yiri R.W Cabdiweli.
Ra’iisul wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, ayaa sheegay in lagama maarmaan ay tahay in dowladda Soomaaliyeed, shacbigeeda iyo adduunka ay iskaasshadaan sidii gurmad loogu fidin lahaa dadkaasi mudada ku dhibaateesnaa magaalada Baraawe.
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed, ayaa ugu hambalyeeyey ciidammada Xoogga dalka Soomaaliyeed iyo Kuwa AMISOM guusha ay dadka iyo dalka u soo hoyee, isagoo mar kale ku celiyey cafiska ay Xukuumadda u fidisay dhallinyarada Al-Shabaab ka tirsan in ay ka faa’ideystaan.
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa ugu dambeyntii ugu baaqay wadamada dariska ah in ay feejignaan dheeri ah sameeyaan maadaama sida uu yiri laga guuleystay Alshabaab, ayna u baxsnayaan magaalooyinka dowladdu maamusho iyo dalalka deriska ah.
“Alshabaab wey kala cararayaan, Muqdisho wey soo gelayaan, dalalka deriska ahna wey u baxsanayaan, marka waxaa deriska ugu baaqeynaa iney feejignaadaan, annaguna waan feejiganahay” ayuu yiri R/wasaare C/weli Sheekh Axmed.
Dhanka kale Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Federaalka Soomaaliya, Cabdullaahi Goodax Barre, ayaa sheegay in Xukuumaddu ay diyaarisay gurmad deg deg ah iyo maamulkii degmada Baraawe, si adeegga Bulshada ay shacbiga u helaan, isla markaana aysan jiri doonin Al-Shabaab waddooyin ay go’dooyimiyaan.
Taliyaha Milateriga Soomaaliya Jen. Indha-qarshe oo shirka Jaraa’id ka hadlay oo la weydiiyey inaan la heyn hubkii farah badnaa ee Alshabaab, ayaa sheegay in Alshabaab ay inta badan ka cararaan marka la weeraro.
Jen. Indhaqarshe ayaa tilmaamay in meelaha qaar Alshabaab looga qabtay hub iyo gaadiid sida degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe.
Saakaa ayey ciidamada dowladda Soomaaliya iyo AMISOM si toos ah ula wareegeen degmada Baraawe, waxaana dadka magaalada meel fagaare ah kala hadlay abaanduulaha ciidamada xooga dalka Jen. C/razaaq Kahliif Cilmid.